Travelingtips Archives | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Travelingtips
7 Izimpophoma Ezinhle Kunazo Zonke eYurophu
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Ukuya eYurophu kubuya emuva esikhathini ezweni elakhiwe lasezigodlweni, amahlathi, nemvelo enhle kakhulu nezimpophoma. Ukuthi uya e-Italy noma eSwitzerland, ukuhlela a 2 uhambo lwezinyanga ezingama-euro, noma ube nesonto izwe elilodwa laseYurophu,…
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izikhangibavakashi Europe
10 Amathiphu Ukuhlala Kumumo ngenkathi Ukuhamba
ngu ULaura Thomas
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela ngaphandle kokungabaza kuyinselele. Ukudla okulingayo kuhlala kunikezwa. Lokhu kuhlangene nekhefu kwendlela yakho ejwayelekile yokuzivocavoca evame ukuholela ekuweni kwenqola yokuqina. Ngakho-ke umuntu uhlala kanjani elungile ngenkathi ehamba? Kuyinto…
Ukuhamba Ngezitimela, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Ukuhlola The Best Okutholakele Nge College Mates
ngu Elliot Rhodes
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Kepha lapho ehamba kulo iviyo bekolishi, kulungile ngokuphelele ngeke ibe uhambo futhi nje izinto ngesikhathi osithandayo. Touring endaweni kungekho okulindele noma iyiphi ukuhlela ngaphambi empeleni indlela engcono kakhulu ukuthola ingcebo efihliweyo. Kushiya indawo eyanele…
Amathiphu Ukuze Riding With Kids On Isitimela
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Imikhaya enezingane izingane, Ukugibela nezingane esitimeleni kungaba kokubili ezijabulisayo futhi ezingabizi ukuhamba. Futhi mhlawumbe ukhululekile kakhulu futhi okungenani ezicindezelayo lapho uhambela nezingane. Thina yazi ukuhamba nezingane is edangalisayo kungakhathaliseki ukuthi…
Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Indlela Save Money On zemininingwane Fares
ngu Niamh Amanzi
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Okuhambayo kuye ngamazwe, noma umuzi ngomuzi, kuyinto amazing ngempela futhi voyaging ngesitimela is eyodwa yezindlela ezingcono kakhulu zokwenza lokhu. European ezitimeleni zamanani ehlisiwe ngokuyinhloko ngokusebenzisa ibanga, Nokho, manje izinkampani eziningi European wesitimela baye bathuthela…
Izincwajana zemininingwane ezezimali, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela
Top 3 Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela Ezisuka eLondon
10 Izitobhi Ezimangalisayo EYurophu
10 I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke
10 Izindawo Ezinemibala Emhlabeni
7 Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi eYurophu